Tratran’ny velapandriky ny polisy: teratany afrikanina mpanao trafikana cocaïne sy heroïne | NewsMada
Tratran’ny velapandriky ny polisy: teratany afrikanina mpanao trafikana cocaïne sy heroïne
Fonosana cocaïnes 10 sy fonosana heroïne telo no sarona teny aminy, tamin’ny nahasamborana azy. Tany an-tranony, nandritra ny fisavana, mbola nahitana karazany hafa maromaro, izay samy rongony mahery vaika avokoa. Voasambotra ny 30 aogositra teo, ity afrikanina ity raha afa-nandositra ny namany iray hafa.
Saron’ny vela-pandriky ny polisy misahana ny ady amin’ny zava-mahadomelina teny Ivandry ny teratany afrikanina, 41 taona mivarotra sy mpanao trafikana cocaïne sy heroïne eto an-drenivohitra. Nahazo loharanom-baovao ny polisy momba ny fisian’ity afrikanina mpanao trafikana zava-mahadomelina ity. Nanao vela-pandrika sy ny fikarohana avy hatrany ny polisy ka nilaza fa hividy izany zava-mahadomelina izany. Araka ny fanazavan’ny polisy, ny asabotsy 25 aogositra 2018 lasa teo dia tonga nivarotra « drogue » tamina hotely iray lehibe eto an-drenivohitra ity teratany afrikanina ity. Tamin’izany no nahafantaran’ny polisy fa mipetraka eny Ivandry izy ka nanomana ny paikady rehetra ahafahana misambotra azy ny polisy ka noraisim-potsiny avy hatrany izy. Ny 30 aogositra 2018 hariva lasa teo, nanao fotoana taminy teny Ankorondrano ireo polisy mody hoe hividy cocaïne. Tonga teny an-toerana tokoa ilay teratany afrikanina niaraka tamin’ireo zava-mahadomelina ka nosamborin’ny polisy. Tratra tany am-paosiny nandritra ny fisavan’ny polisy ny cocaïne madinika miisa 10 sy fonosana heroine miisa telo. Tsy nijanona teo ny polisy fa nitondra azy tany an-tranony mba hikarohana ny ambin’ireo “drogue”.
Nitsoaka ny naman’ilay Afrikanina…
Nitsoaka tampoka niaraka tamin’ireo zava-mahadomelina sasany anefa ny naman’ity teratany afrikanina ity raha vantany vao nahatazana azy niaraka tamin’ny polisy. Nifanenjehan’ny fokonolona sy ny polisy izy, saingy tafaporitsaka ihany. Fantatra ihany koa fa misy “drogue” maromaro ao an-tranony, araka ny loharanom-baovao voarain’ny polisy. Hita tao an-tranony nandritra ny fisavana ny “boulette de cocaine” miisa roa milanja 20 grama, cristal Methamphetamine miisa 26 fonosana madinika, vovoka “lactose” fanapohana izany rongony mahery vaika izany miisa roa fonosana milanja 30 grama ary fitaovana fandanjana. Niaiky ity teratany afrikanina ity nandritra ny fanadihadian’ny polisy fa azy tokoa ireo cocaïne sy heroïne ireo ary namany afrikanina ihany no mpamatsy izany azy. Nilaza izy fa vidiny 75 000 Ar ny iray grama ka hamidiny 100 000 Ar indray avy eo. Nambarany hatrany fa efa ho herintaona no nipetrahan’ity afrikanina ity teto Madagasikara ary efa-bolana no nanaovany ity asa fivarotana sy fanaovana trafikana cocaïne sy heroïne ity.